Shabaab oo sheegay inay dileen Denis - BBC Somali - Warar
Shabaab oo sheegay inay dileen Denis
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 17 Janaayo, 2013, 11:45 GMT 14:45 SGA
Denis Allex waxa la qabsaday sanadkii 2009
Kooxda Shabaab ee xiriirka la leh al-Qaacida ayaa sheegtay inay dileen nin Faransiis ah oo ay haysteen muddo afar sano ah.
War ay ku qoreen boggooda twitter-ka ayaa Shabaab waxa ay ku sheegeen inay dileen Arbacadii Denis Allex, oo ah sarkaal sirdoonka Faransiiska ka tirsanaa.
Toddobaadkii hore ayaa ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Faransiisku waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ay lahaayeen Shabaab oo ku yaal koonfurta Soomaaliya, laakiin waxa ay ku guuldareysteen inay badbaadiyaan Mr Allex.
Laba ciidanka Faransiiska ah iyo 17 Soomaali ah ayaa lagu dilay dagaalka labada dhinac dhexmaray.
Saraakiisha Faransiiska ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in Mr Allex lagu dilay intii uu weerarka socda ciidanka Faransiisku socday.